Yakavanzika Mutemo - ASFO Chitoro
Farmácia Sousa Torres inoita mhiko mukuvanzika nekuchengetedzeka kwemumwe neumwe ruzivo rwemutengi, izvi chete zvinoshandiswa neiyo kemesi kugadzirwa kwekuraira uye kuzivikanwa kwevatengi, kuvapa iwo akagadziriswa maitiro ehunhu.
Kuchengetedzeka kwemutengi nekuvanzika ndevedu nhamba yechipiri yekutanga, iko shure kwehutano hwani. Saka nekudaro, isu tinonetsekana kuchengetedza zvese zvemukati zvakachengeteka, nguva dzose nekugona kukuru kungwara.
1. Sousa Torres Pharmacy inokumbira vatengi vayo munguva yekunyoresa yeakaunti nyowani, nenzira yakajeka, zvinhu zvinotevera:
- Nhamba Yemutero Yekuzivisa;
- Nhamba yenhare;
- Area of ​​Residence;
- Zuva rekuzvarwa;
2. Zvese zvinhu izvi zvakakosha kuti unyore pa webhusaiti, uwane mabasa ekutenga uye zvimwe zvinhu. Nenzira imwecheteyo, ivo vanobatsirawo mukuzivikanwa pachena kweakanyoreswa munhu, pamwe nekukasira kukurumidza kutumira uye kubhadhara maitiro.
3. Ruzivo rwese rwevanhu pachavo zvakananga kana zvisina kunangana zvakaunganidzwa neiyi webhusaiti zvakangosarudzika uye zvinoshandiswa naSousa Torres Pharmacy uye hazvitombotaurwe kune wechitatu-mapato.
4. Sousa Torres Pharmacy haizoshandise chero ruzivo rwekutarisana nemabasa ekushambadzira, kunze kwekunge mutengi akasarudza kutumira otomatiki emanyorero uye / kana ruzivo zvine chekuita nekugadziriswa kwechigadzirwa panguva yekunyoresa, kana zvichishanda.
5. Mutengi anogara achiwana mukana wekuona, kushandura kana kubvisa imwe yemumwe munhu ruzivo kubva kumafayili aSousa Torres Phamacy, nekuwana iyo "Ruzivo Rangu" interface.
Kushandisa webhusaiti yewww.asfo.store kunosanganisira kubvuma chibvumirano ichi chekuvanzika. Iri timu webhusaiti rakachengeterwa kodzero yekuchinja chibvumirano ichi pasina chiziviso chekare. Nekudaro, isu tinokurudzira kuti iwe utarise kune yedu yega yega mutemo, kuitira kuti uzvichengete wega uchigadziriswa.
Kuti uwane mhedzisiro yemibvunzo pane yedu Yakavanzika Policy, ndapota taura nesu.